शाम्भवी महामुद्राको अभ्यासले तपाईँलाई महासमाधिको स्थितिमा पुऱ्याउन सक्छ – Dcnepal
प्रकाशित : २०७८ मंसिर २० गते ७:१६
काठमाडौं। उत्तरायणको समयमा योगीहरूले आफ्नो आध्यात्मिक प्रक्रियातर्फ केही नयाँ प्रयासहरू गर्छन्, किनकि उत्तरायण भनेको कृपा र बद्धत्त्वको समय हो ।
सम भनेको समान वा निष्पक्ष हो । धि भनेको बुद्धि हो । समाधि भनेको “समबुद्धि” हो, अर्थात् सबैथोक निष्पक्ष भएर हेर्ने बुद्धि । यस्तो बुद्धिले असल र खराब, उच्च र निच, हर्ष र पीडा, सुख र दुःखमा कुनै भेदभाव गर्दैन । महासमाधि भनेको समबुद्धिको सर्वोच्च स्तर हो, जहाँ बुद्धिको समभाव सबैभन्दा उच्च हुन्छ- अर्थात्, यस्तो बुद्धि जसले बाहिरबाट ग्रहण गरेको सबैथोक हराएको हुन्छ ।
तपाईंको स्मृतिमा जे-जति छन्, ती पूर्वाग्रही तरिकाले सङ्ग्रह गरिएका हुन्- जस्तै कि ‘मलाई यो व्यक्ति मन पर्छ, त्यो व्यक्ति मन पर्दैन; ऊ असल व्यक्ति हो, ऊ खराब व्यक्ति हो; यो एकदमै ठीक छ, त्यो एकदमै बठीक छ ।’ यी सबै निष्कर्ष र पूर्वाग्रहहरू त्यही स्मृतिको परिणाम हुन् । तपाईं सबैथोकलाई असल र खराब, मन पर्ने र मन नपर्ने, उच्च र निच, भगवान र राक्षस भनेर विभाजन गरिरहनु भएको हुन्छ ।
‘ए ! थुप्रै कुराहरू फेरिएका छन्” भनेर तपाईं आफूलाई मूर्ख बनाउन त सक्नुहोला, तर वास्तवमा केही पनि बदिलिएको हुँदैन । तपाईं जहीँको त्यहीँ रहनुहुन्छ, किनकि तपाईं स्मृतिको भण्डारमा बाँधिनुभएको छ । यस संस्कृतिमा मानिसहरूले ‘हत्तेरी कर्म !’ भनेर भन्ने गर्दथे । हत्तेरी कर्म भनेको के हो भने, तपाईं जतिखेर पनि यो स्मृतिको भारी घिसारेर हिँडिरहनु भएको हुन्छ, तर तपाईं मुक्त हुन चाहनुहुन्छ । यदि मैले ‘ल, जाऔँ !’ भनेँ भने, तपाईं सोध्नुहुन्छ, ‘ अनि, मेरो भारी नि !’ यही भारी नै बन्धन हो । तपाईंलाई अरू कुनै पनि कुराले बाँधिरहेको छैन ।
कर्म नै एकमात्र बन्धन हो । तर, के तपाईं आफ्नो अतीतलाई त्यागेर यत्तिकै यहाँ रहन इच्छुक हुनुहुन्छ ? अहँ, तपाईं आफ्नो पूरै अतीतलाई बोकेर हिँड्न चाहनुहुन्छ । यदि तपाईंले आफ्नो जवानी र स्वास्थ्य पुनः पाउनुभयो भनेपनि, तपाईं पुनः त्यही चीजहरू गर्नुहुनेछ । मलाई यो कुरा पक्का थाहा छ कि तपाईंहरूमध्ये थुप्रैले जीवनको विभिन्न चरणहरूमा आफ्नो सहयात्रीसँग यो वाचा गरिरहनु भएको छ, “यदि म अर्को सात जुनीसम्म यहाँ आएँ भनेपनि, म तिमीसँग मात्रै रहन चाहन्छु !”